China Postal Solution sevhisi uye mumiririri | Sunson
Kutumira Kwesarudzo Solution
Isu tinonyatsonzwisisa mhinduro yeposvo inogara iri sarudzo yekutanga kune e-commerce bhizinesi sezvo ichifarira mwero wakaderera. Kugutsikana kwakasiyana kwemutengesi, isu tinoshanda nemahofisi eposvo mazhinji mumakore apfuura uye tinoramba tichibvisa basa rakaipa nguva nenguva. Iye zvino vamwe vese ndivo vakanyanya kunaka.
China Post yakakamurwa kuita mapasuru epamusoro uye mapasuru akanyoreswa. Iyo yepasi rese pasuru sevhisi yemapasuru anorema isingasviki 2KG. China Post neUniversal Post Union yakagadzira nzira yepasirese yekutumira iyo inogona kusvika muzvitoro zvakasiyana siyana munyika dzinopfuura mazana maviri nematunhu epasirese. Zvakanakira basa repositi reChina: mari uye inodhura, kusvika kwepasirese, kuregererwa kwetsika, kuchengetedzeka uye kugadzikana.
Belgium mapasuru epasuru akapatsanurwa kuita Belgium kuratidza mapasuru neBelgium mapasuru epasirese, ayo ari epasi rese mapasuru anorema asingasviki 2KG. Belgium inoratidza mapasuru anogona kutumirwa kune dzinopfuura makumi maviri nyika muEurope, uye Belgium pasuru pasirese inogona kutumirwa kune dzinopfuura mazana maviri nyika kutenderera pasirese, ruzivo rwekutevera runogona kubvunzwa, Belgian postal service zvakanakira: yakabatana tsika kubvumidzwa muUnited Kingdom, kwete yechipiri yekufambisa munyika dzeEurope, kubhadharisa kilogiramu, inokodzera mwenje uye mapasuru madiki, inogamuchirwa kune akavakirwa-mukati mabhatiri / anotsigira zvigadzirwa zvebhatiri, uye ndiro basa rinosarudzika rekudhura kweEuropean dhirivhari.
Postnl diki pasuru mugero ibasa reEuropean parcel sevhisi rakatangwa zvakanyanya kune vanoyambuka muganho e-commerce vatengesi, vakavakirwa muNetherlands, vachibuditsa nyika dzese dzeEurope, vachivimba nedutch post post network uye inoshanda tsika clearance system, kugadzira mhando yepamusoro parcel services, maDutch postal service zvakanakira: mitengo yakasarudzika, nguva yakagadzikana, yakakodzera mwenje uye mapakeji madiki, uye inogona kugamuchira zvigadzirwa zvine mabhatiri akavakirwa.
Swiss Post yakakamurwa kuita pasuru yepasirese uye yakanyoreswa mapasuru chiteshi. Ndiyo yepamusoro 5 yekuposita sevhisi muUPU uye ndiyo yakanyanya kuvandudzwa tsamba yepositi muEurope. Iyo ine matavi mune ingangoita nyika dzese uye ine yakasimba tsamba yekugadzirisa kugona. Sevhisi zvakwakanakira: inyore tsika clearance, yakagadzikana nguva, mari mabhenefiti, inokodzera mwenje uye zvidiki mapasuru mukati me2KG.